Ogaden News Agency (ONA) – Hogaamiyaha Catalonia Inay Dalkooda Difaaci Doonaan.
Hogaamiyaha Catalonia Inay Dalkooda Difaaci Doonaan.
Posted by ONA Admin	/ October 29, 2017
Xukuumada dalka Spain ayaa lagu wadaa inay dhawaan la wareegto awooda ismaamul gobaleedka Catalonia, kadib markii Baarlamaanka Ismaamulkaasi uu Jimcihii codeeyey in ay gooni uga go’aan dalka Spain.
Saacad kadib go’aanka Baarlamaanka Catalonia ayaa waxaa iyaguna kalfadhi ay yeesheen Baarlamaanka dowlada dhexe ee Madrid waxay si buuxda u taageereen in dowlada Dhexe kala dirto ismaamulka Catalonia hogaamiyeyaashooda iyadoo awood dheeraad ah la siiyey Raysalwasaaraha Spain, iyadoo Baarlamaanka dowlada dhexe uu adeegsaday qodobka 155 ee Dastuurka Spain ee awood u siinaya dowlada dhexe inay kala dirto ismaamulka Catalonia. Ra’iisul wasaaraha Spain ayaa ku dhawaaqay in la kala diray Baarlamaanka iyo Xukuumada Ismaamulka Catalonia oo hada la sheegay inay si toos ah awooda ulla wareegayso xukuumada dhexe ee Madrid.
Madaxweynaha Ismaamulka Catalonia Carles Puigdemont ee xilka laga qaaday ayaa shalay Sabtidii khudbad uu kasoo jeediyey gurigiisa ugu baaqay shacabka Catalonia inay si dimuquraadi ah u difaacdaan xuquuqdooda, isagoo sheegay in Madrid dooneyso inay cabudhiso rabitaanka shacabkooda.
Xiisadan ayaa soo bilaabatay kadib markii ismaamulka Catalonia uu 1dii bishan Oktober qabtay afti ay shacabka gobalkaasi inta codeysay ku taageereen gooni u goosad. Xiligaasi ayey dowlada dhexe Aftidaasi ku tilmaamtay mid sharci daro ah, waxaana looga digay maamulka Catalonia inuu khatar gelinayo nidaamkooda ismaamulka oo ay awood u leedahay dowlada dhexe inay ka xayuubiso hadii ay kusii socdaan gooni u goosadka.
Baarlamaanka Catalonia oo looga digay inay aftidan u adeegsadaan ku dhawaaqida gooni u goosadka ayaa kalfadhigoodii shalay go’aansaday inay codka u qaadaan go’aankaasi, waxaa jiray xildhibaano badan oo kamid ah Golaha Wakiilada Catalonia oo diidanaa in codkaasi la qaado, kuwaasi oo isaga baxay fadhiga kahor intaan codkaasi la qaadin. Xildhibaanada Baarlamaanka Catalania ayaa intooda badan taageeray gooni u goosadka ay u ololeenayeen xukuumada ismaamulkaasi ee uu hogaamiyo Carles Puigdemont.
Beesha Caalamka ayaa inteeda badan gaar ahaan dalalka Midowga Yurub ayaa sheegay inay garab taagan yihiin Dowlada dhexe ee Spain oo aysan ogolaan doonin Catalonia inay gooni u go’ado sidoo kale ma jiro illaa iyo hada dalalka xubnaha ka ah Qaramada Midoobay ee wax soo dhaweyn ah u muujiyey tilaabadan.